जातीय विभेद, बाइबलीय दृष्टिकोण र नेपाली मण्डलीको भूमिका — Breaking News, Headlines & Multimedia
जातीय विभेद, बाइबलीय दृष्टिकोण र नेपाली मण्डलीको भूमिका
राजेन्द्र पौडेलजेठ १६, २०७७
जातीय व्यवस्था सामाजिक सभ्याताको बाधक हो भन्ने कुरामा दुइमत नहोला । जातकै आधारमा गरिने सामाजिक विभेद दक्षिण एसियामा खास गरी भारत र नेपालमा सदिऔँदेखी रहिआएँको छ र यसको जरा धर्म, संस्कृति र सभ्यतासँग गाँसिएको छ । सैयौँ वर्षदेखि जन्मको आधारमा एउटा विशेष समुदायलाई अछुत बनाइएको छ जसलाई हामी दलित भनेर चिन्छौँ ।
दलित समुदायले पुस्तौँसम्म सहँदै आएँको पीडा र अपमानको सही विश्लेषणको गहिराइसम्म पुग्न मजस्तो एउटा गैरदलितले चाहेर पनि सक्दिनँ । कैयौँ पुस्तासम्म दलित समुदायले भोग्नुपरेको अन्याय, अत्याचार, अपमान र विभेदको क्षतिपूर्ति जति दिए पनि कम हुन्छ र समताको सिद्धान्त वा कोटा सरकारले दलित समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिन गरेको प्रयासको एउटा उत्तम नमुना मात्र हुन सक्छ ।
कानुनतः जातको आधारमा गरिने विभेद पूर्ण रूपमा निषेध छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २ अनुसार व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म आदिको आधारमा भेदभाव गर्न पाईंदैन । तर नेपाली समुदायमा व्यावहारिक रूपमा यसले अझै जरा गाडेर बसेको छ । नेपालको जनसङ्ख्याको लगभग १५ प्रतिशत वा ४५ लाख जनसङ्ख्या दलित छन् । ८० प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि पर्दछन् । शिक्षा, रोजगार, सम्पत्तिको उपभोगसाथै अन्य अवसर तथा सुविधाको पहुँचमा दलितलाई पछि पारिएको छ ।
मानिस भएर जन्मेर पनि मानिसले नै जिउन नसकिने जीवन जिउन बाध्य बनाइएको छ । यो नेपालको समग्र विकासको लागि समेत बाधा बनेको छ किनकि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या यस किसिमको विभेदमा परेका छन् । उच्च वर्गका व्यक्तिले समाजका धेरै विशेषाधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् भने दलित र सीमान्तकृत समुदायले अझै पनि आफूले पाउने अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । जातीय व्यवस्था हटाउनका लागि धेरै कुरा कागजमा लेखिए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको छैन । किनभने अझै पनि नेपाली समाजको मानसिकता जातीय व्यवस्थाबाट ग्रसित छ । त्यसबाट छुटकारा पाउन सकिरहेको छैन ।
आफ्नो परिचय खोज्ने क्रममा ‘म कहाँबाट आएँ ? म को हुँ ? वा मलाई कसले, किन र कसरी सृष्टि गर्‍यो ?’ आदि प्रश्नहरू अति नै महत्त्वपूर्ण र आधारभूत हुन्छन् । हामी हरेकले आआफ्नो धर्मशास्त्रमा यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्न जरुरी छ जसरी मैले यहाँ बाइबलीय आधारमा परमेश्वरको सृष्टि र दृष्टिमा मानिसको मुल्य खोज्ने जमर्को गर्दै छु ।
पापले मानिसको जीवनमा बहुआयामिक असरहरू ल्यायो । दोषारोपण र आफूलाई ठिक ठान्ने प्रवृत्तिको शुरुवात पापको असरको रूपमा शुरुका मानिसहरूमा देखियो । यो बढ्दै गयो । एक–आपसमा तिक्तता बढ्यो । मानिसले शासन गर्नतिर पाइला बढायो । मानिसको मन उपद्रवले भरियो । “किनकि सबैले पाप गरेका छन्‌, र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्‌” (रोमी ३:२३) । परमेश्वरसँग र अरू मानिससँग सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । यसरी अहिले पनि हाम्रो समाजमा देखिने मानिसले मानिसलाई गरिने सामाजिक वा जातीय विभेदलाई पापको असरको रूपमा लिन सकिन्छ ।
“तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ, कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो । यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन्‌ बढ़ी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौं । किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने, झन्‌ बढ़ी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौं ।
यति मात्र होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौं, उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ । यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसका निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ । यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्‍यो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनससम्म राज्य गरोस्‌ (रोमी ५:८,९,१०,११,१८,२१) ।
येशूमा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति नयाँ सृष्टि हुन्छ, “यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो । पुरानो बितिगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ” (२ कोरिन्थी ५:१७)
येशूमा भएका मनिसहरू सबै समान हुन्छन् भन्ने कुरा नयाँ नियममा यसरी लेखिएको छ, “अब न त यहूदी छ न ग्रीक, न कमारा छ न फुक्का, न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ” (गलाती ३:२८) ।
जातीय विभेदको मुद्दा नितान्त न्यायसँग जोडिएको विषय हो । हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर न्यायी (Just) हुनुहुन्छ र बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि न्याय वा इन्साफद्वारा नै परमेश्वरको नाम उच्च हुन्छ । “तर सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुको नाउँ इन्साफद्वारा उच्च हुनेछ, र पवित्र परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफूलाई पवित्र देखाउनुहुनेछ” (यशैया ५:१६) ।
“तर न्यायचाहिँ नदीझैँ र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोलाझैँ बगिरहोस्‌ !” (आमोस ५:२४) बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग सिकाएको छ “त्यस्ताहरूको पक्षमा बोल्‌, जो आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्‌, यस्ताहरूका अधिकारको निम्ति जो कङ्गाल छन् । आवाज उठा र न्यायसँग फैसला गर । गरीब र दीन-हीनको अधिकारको रक्षा गर” (हितोपदेश ३१:८-९) ।
येशू आफैले यसो भन्नुभयो, “तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्‌, ‘साँच्चै, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एक जनालाई जे-जति गर्‍यौ, त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्‍यौ'” (मत्ती २५:४०) ।
नेपालमा आज जात व्यवस्था समाजको अर्थ व्यवस्था, सामाजिक संगठन, संस्कृतिको मेरुदण्ड, राजनीति, धर्म र संहिता बनेर जकडिएको छ । त्यसकारण जात व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्नका लागि त्यस्तो आन्दोलन अथवा परिवर्तनको आवश्यकता छ, जसले यी सबैलाई चिर्न सकोस् । अरू कुनै विकल्प छैन । जातीय विभेद अन्त गर्न कुनै एकल समुदाय वा धर्म विशेषको प्रयास यथेष्ट हुनै सक्दैन । त्यसैले सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न जरुरी छ । खासगरी यो मुद्दामा पिडक भनेर चिनिएका कथित उपल्लो जातिहरूले …
(झापा गोलधापका राजेन्द्र पौडेल लामो समयदेखि समुदाय रुपान्तरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ । भारतको केरलास्थित BCTS College, काठमाडौंमा उहाँले United Mission to Nepal मा ५ वर्ष Integral Development Advisor भएर काम गर्नु भयो । हाल Tear fund मा South Asia Network Coordinator को भूमिकामा काम गर्दै आउनुभएका उहाँ Union for Education and Research in Europe, Germany बाट PhD गर्दै हुनुहुन्छ ।)